Ny Adobe Color dia lasa mora azo amin'ny kodiarana vaovao | Famoronana an-tserasera
Kodiarana miloko vaovao azo idirana ao amin'ny Adobe Color for World Accessibility Day
Manuel Ramirez | | Graphic Design, Famolavolana tranonkala
Imbetsaka isika no tsy mahatsapa akory fa ny tontolo iainantsika dia tsy "torontoronina" ampy amin'ny fomba fijery azo idirana. Raha mandeha nomerika isika, Adobe dia nanisy kodiarana miloko vaovao azo idirana avy amin'ny Adobe Color.
Tranonkala Adobe toa fitaovana hamoronana paleta miloko ary avy amin'ireo andalana ireo dia nanoro hevitra anao izahay indraindray. Ankehitriny dia havaozina amin'ny safidy fidirana tsara kokoa hanampiana ireo mpamorona izay maniry ny hamolavolan'ny volavolain'izy ireo azy "koa".
Miresaka kodiarana miloko vaovao izahay Adobe Color miavaka amin'ny fahafaha-miditra amin'ny alàlan'ny famelana ireo mpamorona hanamarina fa mifanaraka amin'ny lohahevitra lokon'izy ireo karazana jamba loko telo: Deuteranopia, Protanopia ary Tritanopia.
Ny zavatra mahaliana amin'ity kodiarana ity ary endri-javatra vaovao amin'ity tranonkala ity mba hamoronana paleta loko, dia manome fomba fijery namboarina momba ny fomba hisehoan'ilay lohahevitra amin'ireo izay voakasik'ireo karazan-jamban'ny loko telo ireo. Tsy misy isalasalana, tolo-kevitra iray avy amin'i Adobe ary te-hiditra amin'ity Andro manerantany ho azo idirana ity.
Tsy fahampiana ao misy fiatraikany amin'ny 3-5% amin'ny mponina eran-tany ny fahitana loko. Rehefa manampy ny fahatsapana mifanohitra amin'izany ianao, ny fihenan'ny fahitana mifandraika amin'ny taona, ary ny olana hafa, miresaka momba ny ampahany matotra amin'ny mponina izay afaka mandray soa avy amin'ny fidirana amin'ny fomba fijery izy.
Ity iray ity Io fitaovana Adobe Color io ihany no ahafahanao manova ny loko misy loko raha hitanao fa misy alokaloka misy fiatraikany amin'ireo karazana olona ireo amin'ny fahitana ara-dalàna ireo faritra amin'ny Internet izay mety misy azy ireo. Noho izany amin'ny alàlan'ny slider dia afaka manamboatra haingana avy amin'ny tranonkala iray ihany isika.
Una Adobe izay andro lasa izay dia nanavao fampiharana maro de Creative Cloud mifandraika amin'ny horonan-tsary sy feo. Aza adino ny vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Kodiarana miloko vaovao azo idirana ao amin'ny Adobe Color for World Accessibility Day